कृषि व्यवसायीकरण गर्न स्थानीय तहले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? :: Setopati
कृषि व्यवसायीकरण गर्न स्थानीय तहले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ?
पदम भण्डारी जेठ २६
नेपालमा प्रायः परम्परागत रुपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अवलम्बन गरिँदै आइएको छ। कृषि विकासका लागि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरु सीमित स्रोत र साधनहरुका कारण एकीकृत रुपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन।
कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिकरण अवलम्बन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिंचाइ, कृषि सडक, ग्रामिण विद्युतिकरण, कृषि उद्योगहरुसंगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रुपमा नभई परम्पराका रुपमा मात्र अवलम्बन गरिँदै आइएको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली/बस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको परिकल्पना गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
यिनै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको लागि स्थानीय निकायहरुले गर्नुपर्ने कामहरुबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।
स्थानीय स्तरमा कृषि प्रवर्द्धनका लागि ऐन, नीति, निर्देशिकाहरु तयार पार्ने। कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाउने।
निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्न र साझेदारी गर्न सार्वजनिक-निजी-साझेदारी संयन्त्र बनाउने। संयन्त्र मार्फत कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोधहरु हटाउन र प्रमुख उत्पादन क्षेत्रहरु जोड्न पहल गर्ने।
राम्रो कृषि अभ्यासको साथमा गिरावट र बाँझो जमिनको उपयोग
उर्वराशक्ति नष्ट भएको र बाँझो जमिनको उपयोग गर्न 'ल्यान्ड बैंक प्रणाली' स्थापना गर्ने। माटोको उर्वराशक्ति सुधार गर्न र माटोमा जैविक पदार्थ बढाउँदै लैजान, जग्गालाई पुनर्जीवित गर्ने र कृषि योग्य बनाउन कार्यक्रम लागु गर्ने।
मल उत्पादन गर्न, फोहरको पुनःप्रयोग गर्न फोहर संकलकहरु, पुनःप्रयोगका लागि समूहहरु र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने। जैविक मल उत्पादन गर्नका लागि सहयोग प्रदान गर्ने र सुरक्षित र राम्रो कृषि अभ्यासहरू र कीटनाशक प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणहरुको प्रयोगको बारेमा चेतना जगाउने।
किसानहरुलाई सुरक्षित र दिगो कृषि अभ्यास अपनाउन प्रोत्साहन गर्न एक प्रमाणीकरण निकायको स्थापना गर्ने।
सिँचाइ सुविधाको लागि कार्यक्रम बनाउने। पानीको उचित उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने। कम पानी चाहिने खालका बालीहरुको खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने।
'एक क्षेत्र-एक बाली' (पकेट क्षेत्र) खेती प्रणाली लागु गर्ने। विषादी रहित खाद्य उत्पादन र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली स्थापित गर्ने। जैविक र इको-लेबल प्रमाणित आफ्नै ब्रान्ड उत्पादन विकास गर्ने।
उत्पादन लागत घटाउन कृषि यन्त्रको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम बनाउने। जस्तै कष्टम हाइरिङ सेवा, कृषि यन्त्रमा अनुदान आदि। कीटनाशक अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना र सेवा प्रदान गर्ने।
बजार माग र आपूर्ति अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र किसानलाई माग अनुसार उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने। किसानलाई उन्नत गुणस्तरीय उत्पादन र बाली भित्र्याउने तरिकाबारे सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने।
प्रशोधन, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ सुबिधाहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने। स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न र यी केन्द्रहरूमार्फत कृषकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने।
बाली भित्र्याए पश्चात (पोष्ट हार्भेष्ट) क्षति न्यूनिकरण
बाली भित्र्याएपश्चात हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न प्रविधि र यातायात अभ्यासमा सुधार गर्न किसानहरूलाई तालिम, उचित प्याकेजिङमा सहयोग, भण्डारण घर निर्माण, भण्डारण डिब्बा आदिमा सहयोग गर्ने। दैनिक खानामा आयातित उत्पादनको सट्टा स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
उत्पादन समूह र सहकारी संस्थाहरूको उत्पादन संकलन र बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहयोग गर्ने। र, मूल्य प्रवाह र बजारलाई सुनिश्चित गर्दै उत्पादन प्रवाहका लागि आउटलेट स्थापना गर्ने। साना र मध्यम खालका कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न सहयोग गर्ने।
संकलन केन्द्रहरू, कोल्ड स्टोरेज, गोदामहरु र बजारहरू स्थापना गर्ने। उत्पादनहरुको लागि थोक खरिद केन्द्रहरू स्थापना गर्ने जहाँ उत्पादनहरू ठूलो परिमाण संकलन गर्न सकियोस्। लेबलिङ, मूल्य निर्धारण, प्याकेजिङ र उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने कृषि-व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने।
स्थानीय उत्पादनको खपत बढाउन प्रचार प्रसार तथा जागरुकता अभियान र प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने। व्यापार मेला र प्रदर्शनीहरु आयोजना गर्ने। कृषि बजार सूचना प्रणाली स्थापित गर्ने। प्रमाणीकरण र गुणस्तर जाँच प्रणाली स्थापित गर्ने।
प्याकेज सामग्री निर्माण गर्न स्थानीय उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने। विशेष कार्यक्रम- हाट बजार, कृषि प्रदर्शनी, स्थानीय उत्पादनको प्रयोग, सपिङ जाँदा आफ्नै झोलाको प्रयोग, शाकाहारी भोजन, पुन:प्रयोग, कुनै कुरा खेर नफाल्ने आदि जस्ता अभियान सञ्चालन गर्ने।
डिजिटल समूहका लागि प्राथमिक समूह र सहकारीलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने। कृषि समूह र सहकारीहरुलाई डिजिटल सेवा मार्फत लेनदेनको व्यवस्था गर्ने। लैङ्गिक मैत्री मेसिनरी र उपकरणलाई ध्यानमा राखी कस्टम हायरिङ सेन्टरहरु सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने।
उपकरण र मेसिनरी पसलहरू स्थापना गर्न सहयोग प्रदान गर्ने। सोसियल मिडियामार्फत स्थानीय उत्पादनहरुको प्रचार गर्ने। नयाँ प्रविधि र नयाँ विशेषज्ञतामा आधारित रहेर उत्पादन तथा सेवाहरु बजारमा ल्याउन कृषि समूह र सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
कृषि समूह र सहकारीहरूको विकास योजनाहरु बनाउन र सो अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहयोग गर्ने। व्यवसायिकता तर्फ उन्मुख योजना तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने।
समूहको गतिशीलता, बजारिकरण, लघु उद्यम विकास, बचत तथा ऋण, स्थानीय स्रोत परिचालन र सुशासनमा कृषि समूह तथा सहकारीहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने। उत्पादकहरु र उपभोक्ताहरूको फाइदाको लागि 'बिचौलियाहरु' का गतिविधिहरू नियमन गर्ने।
उत्पादक, बिचौलिया, व्यापारी, सहकारी, प्रशोधनकर्ता, ढुवानीकर्ता, सेवा प्रदायक, र निर्यातकर्तालाई विभिन्न समूह र संघ/संस्था गठन गर्न र प्रतिस्पर्धि बन्न संगठित सञ्जाल निर्माण गर्न सहयोग गर्ने। व्यवसायका अवसरहरु सृजना गर्न बजार श्रृंखलाका कर्ताहरु बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न र सेवा परवाह गर्न व्यवसाय सेवा डेस्क स्थापना गर्ने।
हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि व्यवसायहरुको विस्तार र सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने। साना कृषि समूहहरुलाई ठूला कृषि सहकारीमा परिणत गरी सामूहिक रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाउने। निष्क्रिय कृषि समूह र सहकारीहरुको पहिचान रद्द गर्ने।
कृषि समूह र सहकारीहरु बीच सहकार्य रहेको पहलहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने। सरकारी, गैरसरकारी, कृषि व्यवसायी, बहुपक्षीय संगठनहरु एवं नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरूमा सान्दर्भिक बजारकर्ताहरुको सहभागितालाई सहज बनाउने।
कोभिड-१९ को परिस्थितिको सामना गर्नका लागि सिफारिस
कृषि बजार केन्द्रहरूमा भौतिक दूरी, सेनिटाइजरहरू र व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुहरुको प्रबन्ध गर्ने। रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने। डिजिटल टेक्नोलोजी/पोर्टल मार्फत रोजगारीका अवसरहरू सम्बन्धी जानकारी प्रसार गर्ने।
छोटो अवधिक सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू आयोजना (उदाहरणका लागि कोभिड-१९ को कारणले रोजगारी गुमाएका युवाहरुलाई कृषि मेसिनरी मर्मत सम्बन्धी तालिम) गर्ने। विदेशबाट घर फर्केका युवाहरुको सीपलाई प्रवर्द्धन गरी सीपमा आधारित प्रशिक्षणबाट स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्ने।
कृषि उत्पादन र कृषि व्यवसायीको व्यापार बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने। स्थानीय कोटा प्रणाली मार्फत विदेशबाट आयात गरिएको कृषि उपजको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने। स्थानीय उत्पादनहरूको मार्केटिंगको सुविधा पुर्‍याउने।
कृषि व्यवसायीहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र उत्पादनहरुलाई ढुवानी गर्नको लागि सहज वातावरण बनाउने। कृषि उद्यमहरुको उत्पादन र सञ्चालनका लागि सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन बैंकहरुसँग सहकार्य गर्ने।
कृषि क्षेत्रमा पूनःकर्जाको सुविधा पुर्‍याउने र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। किसानहरूले लिएको ऋणको भुक्तानी अवधि बढाउने। स्थानीय कृषि व्यवसायलाई बिजुली महसुल र सेवा शुल्क कम गर्ने।
पकेट क्षेत्रहरु पहिचान गरि 'एक क्षेत्र- एक बाली/पशुधन कार्यक्रम लागु गर्ने। लकडाउनको क्रममा समेत बजारमा कृषि उत्पादनहरूको वितरण सुनिश्चित गर्ने।
किसानहरूको मनोबल बढाउनका लागि कार्यक्रमहरु (जस्तै: सम्मान, बीमा, प्रदर्शनी भ्रमण र बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति आदि) सञ्चालन गर्ने। स्थानीय उत्पादनलाई राहत प्याकेजको रुपमा वितरण गर्ने र सजिलो पहुँचको लागि स्थानीय बालीहरूको भण्डारण सञ्चालन गर्ने।
अनलाइन अर्डर र होम डेलिभरी प्रणालीहरूको लागि व्यवस्था गर्ने। सहरी क्षेत्रमा प्रत्येक घरको छानामा कौसी खेती प्रवर्द्धन गर्ने।
(लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका एडजङ्ट फ्याकल्टीको रुपमा आवद्ध छन्।)
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २६, २०७८, १५:१६:३८